WestJet kpọrọ VP onye isi ọhụrụ na onye isi na-eguzosi ike n'ihe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » WestJet kpọrọ VP onye isi ọhụrụ na onye isi na-eguzosi ike n'ihe
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Schuster nwere ihe karịrị afọ 19 nke ahụmịhe iguzosi ike n'ihe, gụnyere afọ isii dị ka Onye isi nchịkwa (CEO) nke Velocity Frequent Flyer, mmemme iguzosi ike n'ihe nke Virgin Australia.
WestJet taa kwuputara nhọpụta nke Karl Schuster, dị ka onye isi oche onye isi oche na onye isi na-eguzosi ike n'ihe (CLO). Schuster ga-esonye na ndị isi ndị isi WestJet na mbido 2022, na-esote usoro mbata na ọpụpụ.
Schuster nwere ihe karịrị afọ 19 nke ahụmịhe iguzosi ike n'ihe, gụnyere afọ isii dị ka Onye isi nchịkwa (CEO) nke Velocity Frequent Flyer, mmemme iguzosi ike n'ihe nke Virgin Australia. N'oge ya na Virgin Australia, Schuster tolitere ọsọ ọsọ ka ọ bụrụ otu n'ime mmemme iguzosi ike n'ihe na Australia, na-abawanye ụba ego ha na-enweta kwa afọ; na-abawanye ndị debanyere aha otu na nde 10, site na ndị otu nde 5.3 gara aga; na mmekorita na-eto eto na ụdị ndị ama ama n'ofe obodo ahụ. Tupu oge ya na Velocity, Schuster na-eduzi mmemme iguzosi ike n'ihe ọtụtụ afọ maka Qantas, British Airways na Malaysia ụgbọ ma nye ndụmọdụ ndụmọdụ maka ụgbọ elu dị iche iche n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 15 na Aimia Inc.
Harry Taylor kwuru, "Karl nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme nke ịkwọ ụgbọala dị egwu maka mmemme iguzosi ike n'ihe dị iche iche yana iwepụta nsonaazụ site na ihe ọhụrụ na atụmatụ," Harry Taylor kwuru. WestJet Onye isi oche na onye isi oche oge. "Anyị na-atụ anya ịnabata Karl na WestJet; Ahụmahụ ya sara mbara ga-ebuli mmemme iguzosi ike n'ihe WestJet gaa n'ọkwa dị elu."
CLO bụ ọrụ emepụtara ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ụgbọ elu, na-ahụ maka mkpochapụ nke na-eto eto WestJetMmemme iguzosi ike n'ihe, ngwaahịa, ọrụ na mmekọ site na imepụta ọhụrụ na onye ndu.
"Dịka WestJet Ntugharị site na mgbake ruo na mgbasawanye, ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-etinye nnukwu ego na mmemme iguzosi ike n'ihe nke na-aga nke ọma, enwere m obi ụtọ isonyere ndị otu ahụ n'oge dị oke mkpa n'oge," Schuster kwuru. "Dịka WestJet na-ewuli elu ike, enwere nnukwu ọsọ ọsọ n'ihu WestJet Rewards na anyị ga-arụ ọrụ iji wetara ndị ọbịa uru na ihe ùgwù site na nkwalite ntụkwasị obi na-akpali akpali na ọhụrụ. Enwere m obi ụtọ isonyere ndị otu na-eguzosi ike n'ihe dị elu nke WestJet n'akụkụ d'Arcy Monaghan, Onye isi oche WestJet, Mmemme iguzosi ike n'ihe na ana m atụ anya iso ya na ndị otu ahụ na-arụkọ ọrụ iji bulite mmemme anyị n'ọkwa dị elu."
mgbazinye ego ụlọ ahịa cannabis ekwu, sị:
November 30, 2021 na 08: 08
Dị ka Onye isi ala na onye isi nchịkwa, ọ na-ahụ maka atụmatụ ụgbọ elu, yana Senior Vice President na Chief Marketing Officer. Blọọgụ mara mma nke ukwuu enwere m mmasị ịgụ ya Biko kesaa ozi ndị ọzọ bara uru ịgụ ya. Gaa na ụlọ ọrụ mmepe ngwa mkpanaaka.